ब्रिक्सः चीनको फैलदो प्रभाव
यही भाद्र १८ गते आइतबार चीनको दक्षिणपूर्वमा पर्ने फुचियान प्रान्तको स्यामनमा सुरु भएको नवौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भाद्र २० गते मंगलबार सम्पन्न भएको छ। समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले ब्रिक्स खुलस्त, पारदर्शी, साझा हितयुक्त हुनुका साथै कुनै तेस्रो पक्ष लक्षित नभएको बताए। घुमाउरो अर्थमा उनले ब्रिक्सलाई सबै विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको साझा संस्था बनाउन चाहेको संकेत गरेका छन्। एक दसक अगाडि स्थापित ब्रिक्स अहिले विश्वको महत्वपूर्ण मन्चको रुपमा स्थापित भएको छ।
महासचिव सी चिन फिङले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी चिनियाँ आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गरिबी निवारण, पर्यावरणीय संरक्षण, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यमाथि कडा अनुशासन, चीनको कुटनीतिक सम्बन्ध जस्ता विषयमाथि प्रकाश पारिएको छ । सीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका अनुसार चीनले सुधार र खुलापनलाई अँगाल्दै आएको चीनले बजारलाई अझै खुल्ला गर्ने नीति लिएको छ ।
नेपालले सिक्किमबाट पाठ सिकोस्
थिङ्कट्याङ्कलाई चिनियाँ कुटनीतिको महत्वपूर्ण खम्बा मानिन्छ। विभिन्न देशसँग सम्बन्धित चिनियाँ थिङ्कट्याङ्कले तयार बनाएको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा चीनको परराष्ट्रमन्त्रालयले विदेश नीति निर्धारण गर्दछ। चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा विभिन्न देश र क्षेत्र हेर्ने निकाय छन्।
चिनियाँको नेपाली भाषा
रेडियो बेइजिङको नाम परिवर्तन भएर चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सीआरआई भयो। रेडियो बेइजिङबाट सीआरआई हुँदासम्म नेपालमा ५ सय भन्दा बढी श्रोता क्लबहरु थिए। प्रकाश बाबु पौडैल, टिकाराम घिमिरे, राजेन्द्र पहाडी, दुर्गा घिमिरे, राजेन्द्र रिमाल लगायतका हामी सीआरआईका सक्रिय श्रोता मिलेर २०५३ सालमा 'सीआरआई श्रोता क्लबहरुको राष्ट्रिय परिषद नेपाल' बनायौँ। नेपालभर रहेका सम्पूर्ण श्रोता क्लबहरु छाता संगठन थियो यो।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध युगौँ पुरानो छ। दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धमा मन्जुश्री, भृकुटी, अरनिको जस्ता सांस्कृतिक दूतले दुईदेशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने काम गरेका छन्। चीनबाट गएका मन्जुश्रीले चोभारको गल्छी काटेर तालको पानी बाहिर पठाई काठमाडौँ उत्पत्यकामा बस्ती बसाएको इतिहास छ।
भड्किँदैछ चिनिया�� समाज
सन् 1978 मा तङ स्यावो फिङ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निर्णायक तहमा आएपछि बन्द चिनियाँ समाजलाई खुला समाजतर्फ डोहोर्‍याउन केही मार्गचित्र प्रस्तुत गरे। सुधार र खुलापन नामबाट चीनले विश्वलाई आश्चर्य बनाउने गरी आर्थिक विकासको छलाङ मारेको तङ स्यावो फिङको नीतिले नै हो। उनलाई आधुनिक चीनका मार्गदर्शक महान नेता मानिन्छ। तङकै नीतिले चीन आज संसारको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा छ। बन्दबाट खुला र सुधारमा क्रमिक अगाडि बढेको तर पूरै पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था स्वीकार नगरेको चिनियाँ अर्थव्यवस्थालाई चिनियाँ चरित्रको बजारमुखी समाजवादी अर्थतन्त्र भनेर चिनियाँ नेताहरु अर्थाउने गर्छन्।
गरिबी निवारणमा चिनियाँ अनुभव
चीनको मध्यभागमा पर्ने कान्सु प्रान्तको लान चौ शहरमा यही असार 22 देखि 25 सम्म 23 औँ चीन लानचौ लगानी तथा व्यापार मेलामा नेपालमा उपराष्ट्रपति सहभागी हुने भएका छन्। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लु खाङ्गले गत बिहिबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुराको संकेत गर्दै लानचौ मेलामा चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा गरिबी निवारणको नमूना
चीनमा तिब्बत स्वायत्त प्रदेश बाहिर दसवटा तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर रहेका छन्। दसवटा तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमध्ये कान्सु प्रान्तको दक्षिणी भेगमा रहेको काननान एउटा हो। काननान स्वायत्त तिब्बती प्रिफेक्चरको क्षेत्रफल 40 हजार 8 सय 98 किलोमिटर रहेको छ। यहाँको सरदर उचाइ समुद्री सतहभन्दा तीन हजार मिटर रहेको छ।
चिनियाँ हाते चिया
फुचियान प्रान्तको वुयि पर्वतमा मात्र पाइने चट्टाने चियालाई 'रक टी' भनिन्छ। ओलङ चियाकै एउटा प्रकारका रुपमा रहेको रक टीलाई चिनियाँ भाषामा 'ताहोङफावो' भनिन्छ। फुचियान प्रान्तको उत्तरी क्षेत्रको वुयिपर्वतको अत्यन्त जोखिमपूर्ण चट्टानका खोँचहरुमा चियाका बुट्टाहरु छन्। त्यहाँ उष्ण प्रदेशमा जस्तै प्राय पानी परिरहन्छ तर गर्मी चाहिँ हुँदैन। अष्ठ्यारा चट्टानमा पलाएका चियाका बुट्टालाई 365 वर्षदेखि संरक्षण गरेर राखिएको छ। त्यहाँको चिया वर्षको एकपटक मात्र टिपिन्छ। विशेष गरी अप्रिलदेखि जुन महिनामा टिपेर हातैले बनाइने यो चिया सबैभन्दा महङ्गो चियामा पर्दछ।
बीआरआई प्रवेशपछि के गर्ने ?
चीनले अगाडि सारेको बहुपक्षीय अवधारणा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ 'बीआरआई'मा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल र भारतमा तिब्र प्रतिक्रियाहरु देखिए। बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि कायापलट नै हुने भयो जसरी यो विषयलाई नेपालमा व्याख्या गरियो भने भारतीय संचारमाध्यमले बीआरआईमा नेपालको प्रवेशलले भारतलाई तनाव र चिन्ता उत्पन्न भएको भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरे। भारतका लागि नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायले बीआर���ईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको प्रतिक्रिया भारतीय संचार माध्यमलाई दिए।
विश्वको अगुवाइ गर्ने आकांक्षा
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तका आधारमा चीनले बीआरआईद्वारा पुरानो रेशम मार्गले छुने र चीनका छिमेकी सबै मुलुकमा मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक विकास गर्ने बताए। उनले सन् 2014 देखि 2016 सम्म चीनले 'बेल्ट एन्ड रोड'ले छुने मुलुकसँगको व्यापारको कुल रकम 30 खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएको जानकारी दिँदै यस क्षेत्रमा भएको लगानी पनि 50 अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेका बताए। चिनियाँ व्यवसायीले सम्बन्धित मुलुकलाई 1 अर्ब 10 करोड डलरको कर तिर्दै 1 लाख 80 हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको जानकारी दिए।
चिनियाँ पत्रकारिताको अवस्था
माध्यममा चिनियाँ संचार जगतका बारेमा अत्यन्त थोरै जानकारी पाइन्छ। चिनियाँ संचारको विकासले नेपाली संचार जगतलाई पनि अतुलनीय फाइदा पुर्‍याउन सक्छ। विशेष गरी चिनियाँ प्रविधि र अनुभव नेपाली संचार उद्योगका लागि निकै फलदायी हुनेछ।
चङ्गा दुई हजार वर्षभन्दा अगाडि चीनमा आविष्कार भएको हो। चङ्गासँग चिनियाँ संस्कृति जोडिएको छ। पहिले पहिले चीनमा काठबाट चङ्गा बनाइन्थ्यो। पछि चीनमै कागजको आविस्कार भएपछि कागजबाट चङ्गा बनाउन थालियो।
नेपाली भाषाका गुरु वाङ
चीनको सिचुवान प्रान्तमा सन् 1968 मा जन्मिएका 49 वर्षीय वाङ चुङ सन् 1991 देखि हनान प्रान्तको हनान विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषा अध्यापन गर्छन् । एसियाली भाषा तथा साहित्यमा विद्यावारिधि गरेका वाङ सहप्राध्यापक भइसकेका छन् र सो विश्वविद्यालयको एसियाली विभागका प्रमुख पनि हुन् ।
चीन भ्रमणपछि प्रचण्डको परीक्षा
आफूलाई चीनको असल मित्रका रूपमा परिचय गराएका प्रचण्डले चीनको विश्वास जितेका थिए तर त्यो विश्वासको केही अंश उनले चीनबाट फर्कंदा बाटामै गुमाए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले पत्रकारलाई भने, 'मेरो राजनीतिक र औपचारिक विदेश भ्रमण त भारतबाटै हुन्छ।
बिनातयारीको प्रचण्ड भ्रमण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले चीनको हाइनान प्रान्तमा आयोजना हुने बोआओ एसिया फोरममा भाग लिँदै चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। नौ महिने तमसुकमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले कुर्सी छोड्नुभन्दा पहिले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने तीव्र इच्छा प्रकट गरेका कारण बेइजिङ भ्रमणको तारतम्य मिलेको छ।
दुई अधिवेशनका मुद्दाहरु
चीनले सन् 1978 देखि सुधार तथा खुलापन लागू गरेको हो। चिनियाँ चरित्रको बजारमुखी अर्थतन्त्रकै कारण आज चीनको अर्थतन्त्र अत्यन्त मजबुत र सकारात्मक छ। विश्वअर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई त्यसले छुन नसकेको कारण चीनको अर्थतन्त्र राम्रो भएको र यस सम्बन्धी चिनियाँ नीति सफल भएकाले हो। यस्तो अवस्थामा दुई अधिवेशनमा छलफल हुने र पारित हुने अर्थतन्त्र सम्बन्धी हरेक कुराले विश्वको नजर तानेको छ।
चीनसँग बढ्दो दुरी
गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा नेपाल चीन सम्बन्धले नयाँ उचाइ पाएको थियो। चीनसँग वर्षौँदेखि हुन नसकेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि नेपाली पक्ष मात्र होइन चिनियाँ पक्ष पनि उत्तिकै उत्साही थियो। उसबेला चीनले नेपालमा लगानी बढाउने, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रम मार्फत विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने, रेलवे सेवा जोड्ने, नेपालका संभावित पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्ने जस्ता लक्ष्यसँगै नेपाली हाइड्रोपावरमा व्यापक रुपमा चिनियाँ लगानी गर्ने घोषणा नै गरेको थियो।
चिनियाँ संचारमाध्यममा नेपाल सन्दर्भ
चीन विशाल छ। चीनको एउटा प्रान्त नै नेपालभन्दा कयौँ गुणा ठूलो छ। त्यसमाथि संस्कृति र भाषाको फरकले गर्दा नेपाली विषयको प्रभाव चीनमा नगन्य हुन्छ। पछिल्लो समय चीनले आर्थिक कुटनीतिलाई अगाडि सार्दै आएको छ। चीनमा भएका साना साना घटना पनि विश्व संचार जगतका लागि खुराक बन्न सक्छन्। किनभने त्यसको विश्वमा तीब्र प्रभाव पर्छ। तर नेपालका घटनाले चीनमा खासै प्रभाव नपार्ने हुनाले पनि चिनियाँ संचारका नजर नपरेको हुन सक्छ।
चीन भ्रमणमा आएका पत्रकारहरु हरिबहादुर थापा, गोकर्ण अर्याल, बिजय पौडेल लगायतका साथीहरुलाई गत वर्ष सन् 2016 मे 18 तारिख बेइजिङस्थित लामा मन्दिरमा भेट्ने अवसर मिल्यो। बेइजिङको केन्द्र भागमा रहेको लामा मन्दिर विश्व सम्पदामा सूचिकृत एउटा सांस्कृतिक स्थल हो।
नेपालचीन सैनिक अभ्यासको सांकेतिक अर्थ
नेपाल र चीनबीचमा हुँदै गरेको संयुक्त सैनिक अभ्यासले दुई देशबीचको सम्बन्धमा उर्जा थपेको छ। विशेषत केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार अफसफल बनाइएपछि नेपाल र चीनबीचमा त्यति न्यानो सम्बन्ध हुन नसकेको जगजाहेर छ।
रातो खामको युद्ध
यसै त कम्यनिष्ट मुलुक त्यसमाथि परम्परादेखि नै रातो रङ मन पराउने चिनियाँहरु। ड्रागन रातो, सजावट रातो, आतिथ्य सत्कारको ब्यानर रातो, उपहारको र्‍यापिङ रातो अनि झन्डा रातो। चीनमा रातो रङलाई शक्ति, खुशी, अशल भाग्य र शुभसंकेतका रुपमा लिइन्छ।
रेशमी मार्गमा नेपालको अलमल
चीनले अगाडि सारेको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रममा नेपालले सहभागी जनाउन आनाकानी गरिरहेको छ। सन् 2014 मा नेपालले यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसपछि दुर्इ वर्ष बितिसक्ता पनि नेपालले पूर्ण सहभागी हुने प्रतिवद्धताका साथ हस्ताक्ष्र गरेको छैन।
प्रदूषणविरुद्ध प्रहरी !
बेइजिङका सबै कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई मास्क लगाउन चीन सरकारले उर्दी जारी गरेको छ। प्राय:जसो कार्यालयहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई नि:शुल्क मास्क वितरण पनि गरेका छन्। सुन्दै अचम्म लाग्ने 'मास्क लगाउन पनि सरकारले निर्देशन जारी गर्नुपर्ने !'
अनलाइन सेवा र चिनियाँ अनुभव
केही महिना अगाडि एक नेपाली अनलाइनले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन थापाका बारेमा एउटा झुटो समाचार प्रकाशन गर्‍यो। समाचार प्रकाशन भएको केही समयमै सामाजिक संजालकर्ताले सेयर गर्न थाले। अनलाइनमा देखिएका कुरा यथार्थ हुन् कि होइन भन्ने सत्यतथ्य नकेलाइकन सामाजिक संजालमा सेयर गर्ने प्रचलन नेपालमा अत्यधिक लोकप्रिय छ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन संचारमाध्यमको भूमिका
मकवानपुर पदमपोखरीका शशिकुमार तितुङलाई 2069 बैशाख 12 मा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। माछा मारेर बेच्ने सामान्य पेशामा रहेका गरिब तितुङलाई 'मानव बेचबिखन' अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो। उनको बोलाउने नाम शक्ते रहेछ। मानव बेचबिखनमा सत्य भन्ने व्यक्तिलाई अदालतले 22 वर्ष अगाडि दोषी ठहर गरेको रहेछ।
सम्पादकद्वारा त्यो समाचारको सहादत
उनले भोलिपल्ट बिहानै फ्याक्स पठाएछन्। सायद कार्यालयमा कोही आइनपुगेको अवस्थामा उनले हतार हतार फ्याक्स पठाएको हुन सक्छ। मैले त्यसलाई पाठक पत्रमा राखेँ। जब पत्रिकामा त्यो पाठकपत्र प्रकाशन भयो। दिउँसो हुल बाँधेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका सबैजसो कर्मचारीहरु गाडी नै लिएर नयाँसडक दैनिकको कार्यालयमा आए। हुँदै नभएको समाचार किन छापेको तपाईंसँग के प्रमाण छ जस्ता कुरा उनीहरुले तेर्स्याए।
आर्यकाको चिनियाँ अनभुव
दस वर्षीय आर्यका श्रेष्ठ चीनको राजधानी बेइजिङस्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा5मा पढ्दै छिन्। उनी नेपालबाट चीन गएको6वर्ष भयो। उनले नेपालमा नर्सरी र एलकेजी पढेकी थिइन्। चीन पुगेर उनले एक वर्ष पूर्व प्राथमिक शिशु कक्षा पढिन्। सुरुसुरुमा उनी चिनियाँ पटक्कै बुझ्दिनथिन्। घरमा चिनियाँ टेलिभिजन हेरिरहने र कक्षामा साथीहरुको माहोल बन्दै गएपछि केही महिनामै उनी चिनियाँ बोल्न थालिन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट यस्तो अप्ठ्यारो विषयमा विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थी अन्य विषयको तुलनामा थोरै छन्। त्रिविबाट नेपाली भाषाविज्ञानमा विद्यावारिधी गर्ने थोरै विद्यार्थीमा एकजना चिनियाँ युवती पनि छिन्। गत वर्षदेखि त्रिविबाट नेपाली भाषाविज्ञानमा विद्यावारिधि गरिरहेकी चिनियाँ युवती सिङ युनको नेपाली नाम इन्दिरा हो। चीनको साङतोङ प्रान्तबाट बेइजिङ आएकी 34 वर्षीय इन्दिरा विगत 16 वर्षदेखि नेपाली भाषासँग जोडिएकी छन्।
किन खुल्दैन तातोपानी नाका？
तातोपानी नाका विगत 50 वर्षदेखि नेपाल र चीनलाई जोड्ने एकमात्र मुख्य स्थल नाका हो। यो नाका दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने मुख्य कडी हो। अरनिको राजमार्ग चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भई 2023 सालदेखि संचालनमा आएको हो। यो राजमार्ग बनाउँदा भारत र रुसजस्ता विशाल दुईवटा छिमेकी मुलुकसँग चीन पौँठेजोरी खेलिरहेको थियो। त्यतिबेला रुसले चीनमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो भने भारतसँग युद्ध भइरहेको थियो।